Firy ny rindran-damina tsy maintsy raisiko tsara?
Vao haingana aho no nanontany olona maro manontany tena hoe firy ny backlinks amin'ny tranoko. Inona no mahatonga ity fanontaniana tsotra ity ho sarotra ny hamaly izany? Mino aho fa maro loatra ireo variables izay heverina ho isaky ny tranga manokana. Firy ny bikabikako no ananako? Eny, indray mandeha - izany dia miankina. Ary ny tranonkala tsirairay dia tokony ho voamarina mba hahazoana sary feno. Raha ny marina, ny isa misy ny backlinks dia miankina amin'ny lafiny maro samihafa. Midika izany fa ankoatra ny tanjona fandraharahana voalohany, ny fametrahana tanjona voafaritra tsara ho an'ny backlinks dia zavatra tsy zavatra atao. Tsy ilaina ny mametraka tanjona any, satria tokony hifanaraka tsara ny paikady fanorenana mifandraika amin'izany, i. f. , mba horoahana tsy misy hatak'andro sy araka izay azo atao.
Quality vs. Ny isa
Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy dia tsy mampisy dikany firy ny backlinks manana ahy. Mazava ho azy, miankina amin'ny zavatra azoko tanterahana amin'ny tranokalako ny dian-pianakaviko, miankina amin'ny tariby misy ny sokajy, ny laharana ary ny fizarana misy azy.Raha ny marina dia toe-javatra iray tena mahazatra raha misy vohikala momba ny orinasa iray dia tsara toerana - manana bakety kely vitsivitsy monja.
Mazava ho azy, noho ny filazana fa tsy misy fifaninanana kisendrasendra matihanina, miaraka amin'ny fikarohana mora vidy. Na izany aza, ny tranonkala tahaka izany dia toa tsy dia maro loatra ny fitsidihan'ny mpampiasa. Na izany aza, azontsika atao ny manana tombony farafahakeliny araka ny tombantombana araka ny tokony ho izy amin'ny isa misy ny backlinks. Amin'ny ankapobeny, ny orinasam-pandraharahana amin'ny aterineto dia tokony hanomboka amin'ny 50 eo ho eo ny backlinks. Ny fanentanana amin'ny fampielezan-kevitra SEO sy ny fampandrosoana ankapobeny dia afaka milaza aho fa ity tetikasa ity dia manantena fa ny toerana misy ny laharam-pahamehana dia mety ho hita any amin'ny toerana manodidina ny valin'ny fikarohana dimy.
Noho izany, raha tokony hoeritreretinao hoe firy ny backlinks amin'ny ahy, dia azonao atao tsara kokoa ny mombamomba ny backlink misy anao, fara fahakeliny,. Ity ny lisitry ny lahatsoratry ny bala momba ny lamosina avo lenta:
ny piraofilam-peo rehetra dia manan-danja
avy amin'ny tranokala azo itokisana manana ny lanjan'ny lahatsoratry ny PR
Ny fehezan-teny iray na ny teny filamatra
amina rindranasa dia tafiditra ao amin'ny votoaty ao amin'ny pejy araka izay azo atao
karazana backlink isan-karazany (i. f.
Noho izany, tokony tsy hifantoka amin'ny laharan'ny backlink ianao fa tsy ny kalitaon'ny toetr'andro
. Na dia izany aza dia famitahana betsaka amin'ny finoana fa ny lozisialy rehetra dia manana lanja mitovy. Raha ny marina, manana fehezan-dalàna bitika mahazatra iray dia matetika mety kokoa amin'ny olona an-jatony tsy misy dikany na ambany. Izany no antony ilainao ny mombamomba ny lisitry ny backlink anao dia ny mitazona fahasamihafana ara-pahasalamana eo amin'ny laharana iombonana amin'ny tena izy.
Azoko atao ny manamarina ny fisafidianana ny site. Mazava ho azy, misy ny hetsika goavana horaisina, saingy afaka manamarina haingana farafaharatsiny ireo manan-kolontsaina indrindra, izay mivantana mivantana ny isa. Voalohany indrindra, esory ny rohy rehetra tsy misy ilàna azy, ary koa ny redirect 301. Avy eo, ataovy azo antoka fa tsy manana pejy misy rohy dimy raha lavitra ny tranonao na ny tranonao. Mianara ihany koa ny fampidirana rohy mankany amin'ny tranonkala misy anao. Na izany na tsy izany, aza adino ny manana fombafomba fanamarinana voalamina mba hanamafisana haingana amin'ny rohy rehetra rava amin'ny fotoana mety Source .